British A CAPPELLA group black voices to hit the stage in Myanmar — City Guide
British A CAPPELLA group black voices to hit the stage in Myanmar
The British Council has invited the much acclaimed Black Voicesacappella singing group to perform in Myanmar for the first time. Over an illustrious career spanning more than two decades, Black Voices have shared stages with greats like Ray Charles, Nina Simone, Wynton Marsalis and Take 6, and entertained Nelson Mandela and the British
Their stunning performances and unique brand ofacappella singing include traditional African, Caribbean and English folk songs, jazz, gospel, pop and reggae inatruly harmonic blend which celebrates their rich African, Caribbean and British heritage, yet transcends gender, race, age or religious persuasion.
Their public performance will take place at the Strand Hotel on 20 November at 6.30 pm and it is free of charge for all music lovers in Myanmar. Gitameit,anon-profit music school from Yangon, will also take part in this performance. Kevin Mackenzie, Director of the British Council in Myanmar, said, “We are very pleased indeed to be able to present Black Voices for the first time in Myanmar in collaboration with our friends at Gitameit.
Black Voices is the leading, all-femaleacappella collective in Europe. They are globally celebrated for the unique form ofacappella singing in the Black oral tradition that they bring to the world stage.”.
In addition to the public concert, the group will conductaworkshop at Legacy Music Academy on 19 November for members of Myanmar Music Association, students form the National University of Arts and Culture, Gitameit, Legacy Music Academy, music students from the Institute of Theology Music Department, some Yangon-based choir groups and youth from forum theatre.
For more information about the Black Voices’ performance in Myanmar, please contact Daw Kyi Kyi Pyone, Programme Manager, British Council at kyikyi.pyone@mm.britishcouncil.org
In Myanmar Language
England နိုင်ငံမှနာမည်ကြီးacappella အဖွဲ့ ဖြစ်သည့် Black Voices မှမြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖျော်ဖြေမည်
UK မှနာမည်ကြီးacappella အဖွဲ့ဖြစ်သည့် Black Voices မှမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖျော်ဖြေမည် ဟုသိရသည်။ ဗြိတိသျှကောင်စီသည် အောင်မြင်ကျော်ကြားသည့်acappellaအဆိုရှင်အဖွဲ့ဖြစ်သည့် Black Voices အဖွဲ့အား မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံး အကြိမ်ဖျော်ဖြေပေးရန်ဖိတ်ကြားထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကြာ အောင်မြင်စွာရပ်တည်လာခဲ့သည့် Black Voices အဖွဲ့သည် Ray Charles ၊ Nina Simone ၊ Wynton Marsalis နှင့် Take6တို့ကဲ့သို့သော ဂီတထိပ်သီးတို့နှင့် တွဲဖက်ဖျော်ဖြေခဲ့ဖူးပြီး သမ္မတဟောင်းနယ်လ်ဆင်မင်ဒဲလား နှင့် ဗြိတိန်တော်၀င်မိသားစု အစရှိသည့် ထင်ရှားသူတို့အား ဖျော်ဖြေခဲ့ဖူးသည် ဟုသိရသည်။
၄င်းတို့၏ စွဲမက်ဖွယ်တင်ဆက်မှုနှင့် သူမတူသည့် တူရိယာမပါဘဲ ‘အသံအား’ သက်သက်သာသုံး၍ သီဆိုဖျော်ဖြေသည့်acappella ပုံစံသီဆိုဟန်တို့သည် အာဖရိကန် ကာရစ်ဘီယန် ရိုးရာ၊ အင်္ဂလိပ်ကျေးလက်ဂီတ၊ jazz ၊ gospel ၊ pop ၊ reggae သီချင်းပုံစံများစွာအား အာဖရိက၊ ကာရစ်ဘီယန်၊ ဗြိတိသျှအမွေအနှစ်တို့ဖြင့် ကြွယ်၀စွာထုံမွှမ်းချယ်မှုန်းထားကာ ကျားမ၊ လူမျိုး၊ အသက်အရွယ်၊ ဘာသာအယူတို့၏နယ်နိမိတ်ကို ကျော်လွန်ပျံ့နှံ့သွားသည်။
၄င်းတို့၏ လူထုဖျော်ဖြေပွဲသည် နို၀င်ဘာလ ၂၀ ရက်၊ ညနေ ၆ နာရီခွဲတွင် Strand Hotel ၌ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဂီတမြတ်နိုးသူ ပရိတ်သတ်အတွက် အခမဲ့ တင်ဆက်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါပွဲတွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ “ဂီတမိတ်” ဂီတကျောင်း မှလည်း ပါ၀င်တွဲဖက် တင်ဆက်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ဗြိတိသျှကောင်စီ၏ မြန်မာနိုင်ငံညွှန်ကြားရေးမှူး Kevin Mackenzie က “ဂီတမိတ်မှမိတ်ဆွေများနှင့်ပူးပေါင်းပြီး ကျွန်တော်တို့ Black Voices ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှ ပထမဆုံးဖျော်ဖြေခွင့်ရခဲ့တာ အရမ်းကျေနပ်မိပါတယ်။ Black Voices ဆိုတာ အမျိုးသမီးချည်းပါတဲ့ ဥရောပထိပ်တန်းacappella အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ လူမည်းတို့ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ သီဆိုပုံ ရိုးရာဟန်ကို ကမ္ဘာ့စင်မြင့်ပေါ်ယူဆောင်လာတဲ့ ကမ္ဘာအနှံ့မှာပါ အောင်မြင်တဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ဖျော်ဖြေပွဲအပြင် မြန်မာနိုင်ငံဂီတအစည်းအရုံးမှပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားများ၊ ဂီတမိတ်၊ Legacy Music Academy၊ Institute of Theology Music Department မှ ဂီတကျောင်းသားများ၊ ရန်ကုန်အခြေစိုက် ဓမ္မသံစုံအဖွဲ့များ၊ စိတ်၀င်စားသူလူငယ် များပါ၀င်တက်ရောက်မည်ဖြစ်သည့် ဂီတအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကို နို၀င်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့တွင် Legacy Music Academy ၌ ပြုလုပ်သွားမည်ဟုဆိုသည်။
Black Voices ဖျော်ဖြေပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ သိလိုသည်များစုံစမ်းလိုပါက ဒေါ်ကြည်ကြည်ပြုံး၊ Programme Manager ၊ British Council ၊ kyikyi.pyone@mm.britishcouncil.org သို့ဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်း သိရပါသည်။